China Lotus achara kechioma Bamboo osisi dracaena sanderiana ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Anwụ na-acha Ifuru
Lotus achara kechioma Bamboo osisi dracaena sanderiana
"Lotus Bamboo" bụ otu n'ime ụdị achara dị ụtọ, ọ dabara maka akụrụngwa, ahịhịa, na hydroponics. Uru ịchọ mma dị oke elu, ọ bụkwa otu n'ime obere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ihe ndozi nwere ike itinye n'ime ụlọ ogologo oge.
Achara lotus nwere asụsụ ifuru nke ịbụ onye ntorobịa, na-ebili nwayọ, na ọgaranya ma nwee afọ ojuju.
Osisi Evergreen, ibu ngwa ngwa, dị mfe transplanted, emede nke ala ìhè etoju na oge ufodu ịgbara.
Ikuku ọhụrụ; Mma ụlọ
Na-ahọrọ ihu igwe ọkụ ma na iru mmiri
23–28 ° C dị mma maka uto ya
Ime mbukota: mgbọrọgwụ juru na mmiri jelii na plastic akpa, ná mpụga mbukota: Akwụkwọ katọn / ụfụfụ igbe site na ikuku, osisi crates / Iron crates site n'oké osimiri.
Decolọ mma: Obere osisi achara dị obere dabara nke ọma maka ịkọ ụtụtụ. Enwere ike idozi ya n’elu windo, mbara ihu na tebụl. Enwere ike icho mma ya na ahịrị n'ime inlọ Nzukọ Alaeze ma jiri ya mee ihe maka ifuru okooko osisi.
Mee ka ikuku dị ọcha: Achara Lotus nwere ike ịmịkọta gas dị ka amonia, acetone, benzene, trichlorethylene, formaldehyde, na ụdị ihe ọkụkụ ya pụrụ iche nwere ike belata ike ọgwụgwụ anya mgbe a na-etinye ya na tebụl.
Nke gara aga: Ime ụlọ Osisi Dracaena Sanderiana gburugburu kechioma achara
Osote: Sansevieria Superba
Oriaku Bamboo Plant
Ime ụlọ Osisi Dracaena Sanderiana gburugburu kechioma B ...
Lucky achara Dracaena Tower achara Layer achara ...
Nnennen kechioma achara Dracaena Sanderiana Kwụ Ọtọ